Momba anay - Xiamen Jingqi Rubber & Plastic Co, Ltd.
Xiamen Jingqi Fototra sy Plastika Co, Ltd
Xiamen Jingqi Rubber & Plastika Co, Ltd dia naorina nandritra ny 9 taona mahery tao amin'ny tanàna tsara tarehy-Xiamen. Mifantoka amin'ny famokarana vokatra Silicone sy Rubber ary ny fitaovana famonoana silicone izahay. Izy ireo dia anisan'izany ny bobongolo silicone, bobongolo mofomamy, spatula, Fresh Cover, entana fampiroboroboana ary ireo karazana OEM silicone rehetra. Ankehitriny, ny orinasantsika dia manana atrikasa 1000 metatra toradroa ao Guankou, Xiamen. Misy andiana mpiasa efa za-draharaha sy mahay ary ny haitao famokarana sy ny fitaovam-panandramana mandroso ao amin'ny orinasa iorenantsika, ka mahatratra 100.000 ny habetsaky ny famokarana isan'andro.
Mifanaraka amin'ny filozofianan'ny raharaham-barotra amin'ny "Customer First, Forge Ahead" isika, manaraka ny fitsipiky ny "Customs First" hanome ny mpanjifa serivisy kalitao mendrika.
Tongasoa amin'ny fifantohana!
Ny fahazoana vokatra silicone isan-karazany arakaraka ny takian'ny mpanjifa, aza misalasala mizara aminay momba ny hevitrao, dia hataonay ho tonga lalàna ianao.
Xiamen Jingqi plastika vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika dia famolavolana orinasa vita amin'ny kojakoja vita amin'ny lakozia, fako vita amin'ny ranomandry, famolavolana mofomamy ary fanomezana silicone. manohy fanavaozana amin'ny famolavolana vokatra izahay.
Mamorona vokatra vaovao silicone fomba vaovao.
Ny ekipanay dia nitarika ny injeniera matihanina izay manana traikefa mihoatra ny 10 taona. Izay nokarakarain'ny tale jeneraly iray, talen'ny orinasa mpamokatra, 1manerana, inspektera vokatra 5 ary olona mpivarotra 30 30.